प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा यसरी बन्दैछ नेपाल - Deshko News Deshko News प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा यसरी बन्दैछ नेपाल - Deshko News
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा यसरी बन्दैछ नेपाल
बिनु पोखरेल केपी ओलीको नेतृत्वमा दोस्रोपटक बनेको सरकारले ९ महिना पूरा गरिसकेको छ । ५ वर्षे पूर्ण कार्यकालका लागि बनेको प्रवल बहुमतको सरकारको कामबारे ९/१० महिनामै मूल्यांकन गर्नु वस्तुनिष्ठ हुँदैन । यद्यपि यस अवधिमा सरकार हिँड्न खोजेको दिशाबारे भने विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यो आलेख एक वर्षअघिको वस्तुगत अवस्था र सरकारले लिएको दिशाको विश्लेषणमा केन्द्रित छ ।
एकवर्ष अघिसम्मको परनियन्त्रित राजनीतिक चित्र एकपटक हेरौं-
नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए । नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्रीसामु पत्रकार सम्मेलनमै उभिएर आफ्नो देशको संविधान संशोधन गर्छु भनेर वाचा गर्नुपर्ने अवस्था थियो । पटक पटकका भारतीय नाकाबन्दीबाट चेतेर चीनसँग ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गरेको पारवहन सन्धिको प्रोटोकल अल्झेको अल्झ्यै थियो ।
आइजीपी नियुक्त हुँदा खुलेआम आर्थिक चलखेल, अदालतमा मुद्दा, त्यही मुद्दालाई आधार बनाएर प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग, राज्य सञ्चालनमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमै ठूलो असन्तुलनको अवस्था थियो । राज्य सञ्चालनको आधुनिक विधि र सर्वस्वीकृत पद्दतिमाथि ठूलो प्रहार थियो ।
देशको सार्वभौमिकता माथिको बाह्य साझेदारी र राज्य सञ्चालनको लोकतान्त्रिक पद्दतिमाथि गत सालको प्रहारको अवस्थाबाट आज मुलुक मुक्त भएको छ । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीको राजकीय भ्रमण आदानप्रदान भए र ती भ्रमणहरुमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा छलफलका विषय बनेनन् । दुईपक्षीय हितमा आर्थिक तथा व्यापारिक साझेदारीका विषय महत्वपूर्ण विषय बने । व्यवहारिक रुपमा नेपालको हैसियत भारतको भाइ भन्दा माथि उठ्यो । यस्तै नेपाल-चीन पारवहन प्रोटोकलमा सम्झौता भएको छ । नेपाललाई चीन हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म पुग्ने र व्यापार विविधिकरण विस्तार गर्ने बाटो खुलेको छ । एउटा सार्वभौम राष्ट्रको नागरिकका लागि ओली नेतृत्वको सरकारले सिर्जना गरेको यो संस्थागत स्मृति नेपालको इतिहासमा महत्वपूर्ण रहनेछ ।
हामी नेपाली या हाम्रा आम सञ्चार माध्यम राजनीतिक समाचार बनाउँदा नेताहरुका व्यक्तिगत आकांक्षालाई अगाडि सारेर राजनीतिमा सहमति र असहमतिको केस्रा केलाउने स्थानमा थियौं । त्यसको ठाउँमा आज हामी रेल कहिले आइपुग्छ, पानीजहाज कहिलेदेखि चल्छ,ताप्लेजुङमा केबुलकार कहिले सञ्चालन हुन्छ,पोखरा विमानस्थल र भैरहवामा गौतमवुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कहिले बन्छ, भन्नेजस्ता जीवनसँग गाँसिएका विषयमा विमर्श गर्ने ठाउँमा पुगेका छौं ।
नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिका आकांक्षामाथि राजनीतिक रंग दिएर विश्लेषण गर्ने अभ्यासमा रहेका हामी कतिपयले यस्तो विमर्शलाई पचाउन सकिरहेका छैनौं भन्ने पनि देखिएको छ । सामाजिक सञ्जाल र आम सञ्चार माध्यममा प्रस्तुत हुने नकारात्मकताको कारक हाम्रो हिजोको व्यक्ति केन्दि्रत आकांक्षालाई विवेचना गर्ने अभ्यास पनि हो ।
ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुनुअघि तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । संविधान जारी गर्न अवरोध गर्दै भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो । संविधान जारी गर्नुअघि त्यसलाई रोक्न भारतीय विदेशसचिव टोलेगुण्डा शैलीमा चेतावनी दिन नेपाल आएका थिए । त्यसबेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला भए पनि केपी ओलीको निणर्ायक पहलकदमीमा संविधान जारी भयो । संविधान जारी गर्न निणर्ायक पहलकदमी लिएकै कारणले ओलीप्रति भारत आक्रामक बनेको थियो । सत्तामा जोसुकै रहे पनि भारतीय प्रायोजनमा चलेको पृथकतावादी आन्दोलनको प्रहारको केन्द्रमा ओली त्यसै कारण परेका हुन् ।
संविधान जारी गरिसकेपछि सुशील कोइराला फेरि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा अघि सारिनु र भारत प्रयोजित आन्दोलनमा सद्भाव रहेका दलहरु संविधानप्रति विमति राखे पनि ओली विरुद्ध कोइरालालाई मतदान गर्न उपस्थित हुनुले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको थियो ।
ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भए र आफ्नो मान्यता नछोडीकनै भारतीय नाकाबन्दी पराजित गरे । तर, नाकाबन्दीले घुंडा टेकेपछि ओलीसँग भित्रभित्रै चिढिएको भारतले नयाँ सत्ता गठबन्धनमा मुख्य भूमिका खेल्यो र कांग्रेस र तत्कालीन माओवादीलाई सत्तामा जोडिदियो । उक्त गठबन्धनले भारतले भने बमोजिम संविधान संशोधनको कष्टसाध्य प्रयास गर्यो तर, ओलीका कारण त्यो असफल भयो ।
स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम पछि आफूबाट टाढा पुगेको माओवादीलाई पार्टी एकता सहितको चुनावी सहकार्यमा फर्काएर ओलीले प्रदेश र संघीय संसदको चुनावमा भारतीय प्रयासलाई विफल पारिदिए र दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा उदाए । ओलीसँग जतिसुकै विमति भए पनि छिमेकी भारत सहकार्य गर्न वाध्य भयो । ओलीले पहिलो प्रधानन्त्रित्व कालमा चीनसँग पारवहन सन्धी गरेर नेपाललाई भूजडित बनाइसकेका थिए । त्यसै कारण भारत गल्नुपर्ने अवस्था आयो ।
नेपालमाथि माइक्रो मेनेजमेन्ट गर्दै यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा निणर्ायक शक्ति बनेको भारत विस्तारै आफ्नो पकड गुमाउँदै गयो । पछिल्लोपटक ओली सरकारसँग छिमेकीको हैसियतमा कुटनीतिक सहकार्यमा रहे पनि अन्य सुक्ष्म तत्वहरुलाई प्रयोग गरेर सरकार विरुद्ध प्रहार गर्ने काम उसले छोडेको छैन । सरकार, अझ राज्यको स्थायित्व विरुद्ध मिडियाबाट संयोजित आक्रमण भइरहनुको गुढ कारण त्यहि हो ।
ओली दोस्रो पटक सरकारमा गएपछि
एउटा कुरा भुल्नुहुँदैन, देश भुकम्पले त्यसै थिलोथिलो थियो । त्यसमाथि नाकाबन्दीका अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा थियो । संविधान जारी हुन नदिन विदेशीको खुलेआम हस्तक्षेप, नेपालकै राजनीतिक शक्तिहरुलाई छद्म रुपमा उपयोग गरेर जातीय, क्षेत्रीय मुद्दाहरुमा अन्तरध्वंश मच्चाइरहेको थियो । त्यसमाथि नयाँ चुनावले नयाँ जनादेश दिएपछि राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि तत्कालीन कांग्रेस सरकारले ब्रह्मलूट मच्चायो ।
जनादेश गुमाइसकेपछि भटाभट दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत निर्णय, धमाधम विवादास्पद निकासा र सहयोग वितरणका नाममा राष्ट्रिय ढुकुटीको धुलो उडाई । यसले ८० अर्व घाटामा रहेको ढुकुटी र ८ खर्व दायित्वको बोझ शेरबहादुर देउवाबाट ओली सरकारले विरासतमा पाएको थियो । जनताका स्वाभाविक आकांक्षाको भारी बोकेर निर्वाचित सरकारलाई देउवाले खनिदिएको खाडलबाट उठ्न सरकारलाई कम्ति चुनौति थिएन ।
जीर्ण बनेको देश एउटा चुनावबाट सरकार परिवर्तनको अवस्थामा मात्रै थिएन, व्यवस्था परिवर्तनको संक्रमणकालीन संरचना ओली सरकारले नै खडा गर्नु थियो । पहिलो पटक संघीयतामा गएको देशमा अघिल्लै सरकारले खडा गर्नुपर्ने न्युनतम नीतिगत र संरचनागत पूर्वाधार नयाँ सरकार आएपछि मात्रै पूरा भए, कानुनहरु त्यसपछि मात्रै बने । यस्तो कठीन चुनौतिबाट ओलीले नौ महिनामा देशलाई लयमा फर्काएका छन् । विकास निर्माण र दीर्घकालीन संरचना निर्माणका योजनाहरु अघि सारेका छन् र अव तिनको कार्यान्वयनको चरण अघि बढेको छ ।
हाम्रो भूमिमा औचित्यहीन रुपमा बसेको विदेशी सैनिक क्याम्प हटाउने विषयमा पनि बोल्न नसक्ने कमजोर मनोवलको अवस्थामा रहेको नेपाललाई ओली सरकारले विराटनगरमा १० वर्षदेखि रहेको भारतीय फिल्ड अफिस बन्द गरायो । हरेक वषर्ायाममा आउने बाढीले नेपालको तराई क्षेत्र डुवानमा पथ्र्याे । यसवर्ष वर्षा सुरु हुनु अगावै दुईपक्षीय अनुगमन टोली बनाई भारतले सीमा क्षेत्रमा बनाएका गैरकानुनी बाँधको अध्ययन गरी हटाउन लगाइयो । जसका कारण बाढीका कारण विगतजस्तो यसपटक ठूलो धनजनको क्षति हुन पाएन ।
संविधान जलाउनेहरु सरकारमा
८३ प्रतिशत जनताको सहभागितामा बनेको संविधानमा सबैको सहभागिता नभएको भन्दै भारतले टाङअड्याएको थियो । त्यसका देखावटी मोर्चामा थिए मधेसकेन्दि्रत दल । उनीहरु बाहिरी प्रदर्शनका माल थिए, सञ्चालक भारत थियो। जव चुनावी नतिजा ओलीको पक्षमा आयो भारतले आफ्नो भूमिकामा पुनर्विचार गर्नु पर्यो । फलस्वरुप संविधान अस्वीकार गर्दै सिंगो मुलुकलाई अस्थिरताको दलदलमा धस्न उद्यत मधेसकेन्दि्रत दल संविधान अनुरुप बन्ने सरकारमा सामेल हुने अवस्थासम्म पुगे ।
ओलीले आफूसँग दुईतिहाई नजिकको समर्थन संसदमा हुँदाहुँदै ती दलमध्येको एकलाई सरकारमा सामेल गर्नु तिक्तताबाट धाँजा खोज्ने शक्तिलाई दिएको जवाफका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । हिजो जहाँ धाँजा भेटिन्छ, त्यहीँ गल लगाएर अस्थिरताको आगो बाल्ने मैदान बनेको तराई आज शान्त छ । विकासका दीर्घकालीन योजना अघि सारेर जनताको जीवनमा परिवर्तनका लागि मार्गप्रशस्त भएको छ ।
हामीले भोगेका हौं, यहाँका मिडियामा पहुँच भएका लेखक साहित्यकारहरु भारतीय नाकाबन्दीको समर्थनमा नाकामा धर्ना बसेको घटना । हामीले यो पनि भोगेका हौं, नेपालमा संविधान जारी हुँदा अशान्ति हुने तर्क गर्दै संविधान रोक्ने भारतको चाहनामा बल पुर्‍याउँदै लेख्ने सम्पादक र स्तम्भकार पनि । उनीहरु हरेक कुरालाई यसो गर्दा के भारत खुसी होला त भन्ने कुरा आफ्नो लेखनीमा कोण खोज्थे । हिजोका भूमिकाको त्यही सुसुप्तता अहिले मिडियाका माध्यमबाट अझ मूर्त बनेको छ । राजनीतिक तवरमा आफ्नो नियन्त्रण गुमाएपछि त्यस्तो वैदेशिक शक्ति मिडियाले निर्माण गर्ने जनमतमा आफ्नो एङ्गल निर्माण गर्न सक्रिय छ ।
नेपाल बन्नै सक्दैन भन्ने बनिबनाऊ धारणा अब विस्तारै परिवर्तन हुन थालेको छ । देशमा श्रम गरेर जीविका गर्न चाहनेहरुका लागि सरकारले योगदानमा आधिारित सामाजिक सुरक्षा लागू गरेको छ । विदेशबाट शिप लिएर र्फकने नागरिकले व्यवसाय गर्न चाहेमा १० लाखसम्मको ऋण दिने नीति अघि सारेको छ । पूर्ववर्ती सरकारको नीतिका कारण बन्द रहेका उद्योगहरु पुन खुल्न थालेका छन् । साना किसानहरुको कृषि ऋण मिनाहा गरिएको छ । स्वदेशमै कपडा उद्योग चलाउनेलाई भन्सार छुटको व्यवस्था मिलाएको छ । यी यस्ता नीतिगत योजना हुन् जसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न मदत गर्छ ।
गलत नीतिका कारण लामो समयसम्म विद्युत लोडसेडिङ व्यहोर्दै आएका नेपाल लोडसेडिङ मुक्त भएको छ । अव उत्पादनको तयारीमा रहेका परियोजनाहरु सम्पन्न हुँदा नेपालले ५ हजार मेगावाट विद्युत बेच्न पाउनेछ । नेपालमा उत्पादित विद्युतमा भारतले पहिलेदेखि कानुनी रुपमै अवरोध गर्दै आएको थियो । ओली सरकारले त्यसलाई अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री स्तरमा छलफल गर्‍यो । अहिले भारतले त्यस्तो कानुन हटाएर नेपाललाई विद्युत व्यापार गर्न गरेको अवरोध हटाएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा छिटै परिवर्तन ल्याउन सक्ने कदमका रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।
लामो समयदेखि अलपत्र रहेका विकास आयोजनाहरु पछिल्लो पटक द्रूत गतिमा अघि बढेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विमानस्थल हुन् वा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण र रेल्वे निर्माण अघि बढेका छन् । भारतले अहिलेसम्म अड्काएर राखेका आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न गर्ने भारतीय प्रमसँग लिखित प्रतिबध्ता भएको छ भने बीरगञ्ज काठमाडौं रेल्वे सम्झौता गरी प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न भएको छ ।भन्सारमा आयातमा हुने भ्रष्टाचार कडाइ गरेपछि गएको चार महिनामै लक्ष्य भन्दा ३० प्रतिशत बढी राजस्व उठेको छ ।
विप्रेषण रकम ३७ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । गैरकानुनी बाटोबाट भित्रिने रकममा -हुण्डी ब्यावसाय) नियन्त्रण गरेकोले यो कानुनी बाटो भएर आउन थालेपछि सरकारले यसमा सफलता पाएको छ । नेपाल चीन जोड्ने विभिन्न सडक निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । चीनसँग केरुङ्ग काठमाडौं रेलको सर्वे सकेर काम अघि बढेको छ ।चीनले डिपिआर बनाउने कुरामा सहमति भएको छ । चीनकै सहयोगमा काठमाडौं चक्रपथमा मोनोरेल चलाउनको लागि डिपियार तयार गर्ने सम्झौता भएको छ ।
नेपालले चीनसँग चारवटा बन्दरगाह प्रयोग गर्ने सम्झौता गरी प्रोटोकलमा सहमति गरेपछि एक छिमेकी नियन्त्रित अर्थतन्त्रको बाटोबाट हामी मुक्त हुँदैछौं । चीन र बंगलादेशसँग भएको ऊर्जासम्झौताले हामी व्यापार विविधिकरणमा नयाँ फड्को मार्ने तयारीमा छौं भन्ने देखाउँछ ।
हावाबाट विजुलीलाई हावा कुरा भन्दै उडाउने हामी नै हौं तर, ताप्लेजुङमा हावाबाट निजुली निकालिएको छ । नुवाकोटमा २५ मेगावाटको सोलार ऊर्जा उत्पादनको काम सम्पन्न भएको छ । १५, पाँच बर्ष भित्रमा पाँचसय मेगावाट सोलार ऊर्जा उत्पादन गर्ने सरकारले कार्यक्रम अघि बढाएको छ । यो दक्षिण एसियाकै दोस्रो ठूलो सोलार ऊर्जा प्लान्ट हुनेछ ।
कतार र जापानमा पनि नेपाली कामदारले जीटुजी सम्झौता मार्फत श्रम गन्तब्य बनाउन पाउने भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तब्य रहेको मलेसियामा जाने कामदार दलालबाट ठगिंदै आएका थिए । उनीहरुले अव रोजगारीमा जान रकम तिर्नु नपर्ने भएको छ ।
सरकारले निर्माण व्यवसायमा भइरहेको लापर्वाही र ढिलासुस्ती हटाउन ठेकेदारहरुलाई कारवाही अघि बढाइरहेको छ । काम अघि नबढाउनेलाई प्रत्येक दिनको हर्जाना सिस्टम लागू गरेर मुख्य विकास आयोजना र पूर्वाधार निर्माणलाई द्रूत गतिमा अघि बढाइरहेको छ । त्यसका लागि डिजिटल अनुगमन प्रणालीको विकास गरिएको छ । अघिल्लो पटक गरिएको संकल्प अनुरुप तुइन रहेका ठाउँमा सरकारले झोलुङ्गे पुल बनाएको छ ।
हिजो भारतसँग डोमिनेन्ट वैदेशिक नीतिमा चलेको नेपाल आज विश्वका धेरै देशसँग कुटनीतिक सम्बन्ध विस्तार र सुदृढिकरण गरिरहेको छ । १८ बर्ष पछि नेपाल र अमेरिकाबीच कुटनीतिक भ्रमण आदानप्रदान भएको छ । जापानसँग सिधै हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने सम्झौता हुँदैछ ।
नेपालमा हुने सुन तस्करी नियन्त्रित भएको छ । विगतमा तस्करी भएको ३३ किलो सुन तस्करमाथि कारवाही भएको छ । भारतमा उक्त सुन फेला परेको छ ।
३४ ठूला परियोजनाहरुमा धमाधम काम भइरहेका छन् । मध्यपहाडी लोकमार्गको कालोपत्रे सुरु भएको छ । पूर्वपश्चिम रेल मार्गको डीपीआर निर्माण सम्मपन्न हुने अवस्थामा छ । जयनगरबाट बर्दिवास नजिकैको कुर्था सम्म एसै बर्ष रेल संचालनमा आउने तयारी छ । बर्दिवास देखि सिमरा सम्मको रेलको मार्गको लागि काम अघि बढिरहेको छ ।
नेपालमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै पर्यटक नेपाल भित्रिए भनेर हामीले समाचार हेरिरहेका छौं । हामी रेल र पानी जहाजको कुरा गरिरहेका छौ । यसका चालक र इन्जिनियर उत्पादन गर्न चीनले सघाउने भएको छ । यो विकासको एउटा सुखद सुरुवात होइन ?हामीले हाम्रा सुखद् सुरुवातलाई नै देख्न सकेनौं भने जीवनमा हामी अंध्यारो मात्र देख्ने निशाचर हुन पुग्छौं ।
हाम्रो निकट विगत कस्तो थियो ? हामी निर्माणको कस्तो विरासतबाट यहाँसम्म आइपुगेका हौं ? त्यसका आधारमा अहिलेको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्न सक्छौं । त्यसका आधारमा भन्ने हो भने हामीले निराशा वितरण गर्नुपर्ने ठाउँ छैन ।